India na -ekepụta ụgbọ elu Drone dị irè iji mee ka ọ dị mma nke ukwuu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » India na -ekepụta ụgbọ elu Drone dị irè iji mee ka ọ dị mma nke ukwuu
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Industrylọ ọrụ drone India
Maazị Jyotiraditya Scindia, onye minista na-ahụ maka ụgbọ elu India, kwuru taa na ọrụ gọọmentị agbanweela n'okpuru onye isi ala Prime Minister Narendra Modi, na ọ na-arụ ọrụ dị ka onye na-enyere aka, ọ bụghị onye na-ahazi, na-elele ụzọ ọhụrụ nke dabere. amụma maka drones.
Teknụzụ Drone ga -ewetara ndị bi na nsọtụ etiti mmepe.
Enwere atụmatụ iji drones iji maapụ puku kwuru puku obodo nke ga -enye ụlọ ọrụ drone India nnukwu mmụba.
N'iji ugbu a, drones ga-adị irè n'inye ọgwụ mgbochi, na-ebute mmụba nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Mgbe ọ na -agwa nnọkọ a na "Drones maka Ọha Ọha - Mmemme Nghọta Mass," nke Federation of Chambers of Commerce and Industry (FICCI) na ụlọ ọrụ ego mmepe (DFI) na mmekorita ya na World Economic Forum, Maazị Scindia kwuru teknụzụ. nkwalite dị oke mkpa na teknụzụ drone ga -ewetara ndị bi na nsọtụ etiti mmepe. Ọ sịrị, "Drones na -arụ ọrụ dị mkpa n'ịjikọ ndị mmadụ n'ogologo na obosara obodo a,"
India dị ka obodo, Maazị Scindia kwuru, n'ozuzu ya bụ onye na -eso ụzọ na mmalite nke ihe ọhụrụ ma ọ bụ teknụzụ. Nke a bụ oge mbụ anyị na -ele anya ịbụ ndị isi, onye minista na -ahụ maka ụgbọ elu kwuru.
Iwu ọhụrụ nke drone, na-esonye na atụmatụ mkpali metụtara njikọ (PLI) maka drones, na-enye ụlọ ọrụ ọhụrụ nke nrụpụta ụlọ nnukwu nkwalite. Maazị Scindia kwuru, "Ọnụ ụzọ mgbakwunye ọnụ ahịa ruru pasenti iri anọ maka ngalaba ahụ na -enye ohere pụrụ iche iji bido mmalite na -efe efe."
Ọ gara n'ihu kwuo na ka teknụzụ ọ bụla wee nwee ihe ịga nke ọma, ọ chọrọ usoro 3 - usoro amụma, mkpali ego, yana usoro chọrọ. Gọọmentị India, ọ gara n'ihu kwuo, n'okpuru nyocha nke ndị obodo na eserese na teknụzụ e mepụtara na mpaghara ime obodo (SVAMITVA) na -ezube iji ụgbọ elu drones iji maapụ puku kwuru puku obodo nke ga -eme. nye ụlọ ọrụ drone India nnukwu mmụba.
India nwere mpaghara ụfọdụ siri ike iru, na drones ga-adị irè n'inye ọgwụ mgbochi, na-ebute mmụba nke ịgba ọgwụ mgbochi, minista ahụ kwukwara. Maazị Scindia kwuru, "Gọọmentị na -arụ ọrụ ugbu a dị ka onye ahịa arịlịka site n'iji ọgwụ mgbochi na eserese na ịmepụta usoro chọrọ maka teknụzụ drone na India." Gọọmentị kwadoro atụmatụ PLI maka ụlọ ọrụ drone ga -eweta ntinye ego ọhụrụ na ịkwalite ọrụ na India, onye ozi ahụ kwuru. O kwuru na teknụzụ drone na -agba ọsọ wee gbaa ndị ụlọ ọrụ ume ka ha nyere aka na teknụzụ ahụ pụọ.
Maazị Rajan Luthra, Onye isi oche na Kọmitii FICCI na Drones na Ọfịs Onye isi oche - Onye isi ọrụ pụrụ iche, Reliance Industries, Ltd., kwuru na ọrụ ugbo bụ otu n'ime ngalaba kachasị mkpa na India nwere nnukwu ahịa nwere yana iji drones maka ọrụ ugbo. ga -eweta uru dị ukwuu nye ndị ọrụ ugbo na mmadụ nkịtị.
Maazị Vignesh Santhanam, Aerospace na Drones, World Economic Forum, kwuru na drones kwesịrị ịkwado usoro nyocha agri iji kwado ngalaba ahụ site na mmụba na mmụba nke ndị bi n'ime ime obodo maka ibi ndụ dị mma ebe ọ na -abụ ụlọ ọkụ maka teknụzụ IR nke anọ.
Maazị Smit Shah, onye isi mmekọrịta, DFI kwuru, "Anyị na -anabata mbọ nke minista dị ka onye mmekọ nke ụlọ ọrụ a."